Internetka & Argagixisada Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Internetka & Argagixisada Al-Shabaab
Cabdi Macallim - Isku dayga al-Shabaab ay ku mamnuuceeyso internetka xawaarahiisa sarreeyo ee fiber-optic-ga iyo adeegga moobiillada internetka leh ayaa caro kala kulmay muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana uu keenay in ay xukuumaddu soo saarto digniin culus.
Hadal 8-dii January lagu baahiyay website-ka Al-Shabaab, ayay al-Shabaab ku dhawaaqday mamnuucidda internetka, iyada oo ku amartay shirkadaha isgaarsiinta in ay adeegga internetka ku joojiyaan 15 maalmood gudahood.
Hadalka ayaa sidoo kale loogu digay shirkadaha iyo shakhsiyaadka aan u hoggansamin amarkan in loo arki doono cadow laguna ciqaabi doono shareecada Islaamka.
Al-Shabaab ayaa ku sababeeysay xayiraaddeeda in hay'ado sirdoon oo reer Galbeed ah, khaas ahaan hay'adaha sirdoonka ah ee Maraykanka iyo Ingiriiska, ay u isticmaalaan internetka in ay ku aruursadaan xogta mujaahiddiinta.
"Internetka laga isticmaalo moobiilka waxa uu halis ku yahay qof walba oo Muslim ah oo isticmaala adeeggaas bacdamaa uu cadowga u oggolaanayo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa shakhsiyaadka iyo ururinta xogta," ayaa lagu sheegay hadalka.
"Internetka laga isticmaalo moobiilka ayaa khatar gaar ah ku ah ammaanka Muslimiinta la dagaallamaaya cadowga, sababta oo ah wuxuu sahlay in basaasiintu fursad isa soo taraysa u helaan in ay xogta mujaahiddiinta u gudbiyaan hay'adaha sridoonka ee ku badan dalka," ayaa lagu sheegay.
Hadalka al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in internetka uu halis ku yahay carruurta iyo dhallinyarada oo gala dabadeedna qaybiya macluumaad ka hor imaanaya mabaadii'da Islaamka. Dhallinyarada oo sii isticmaasha internetka waxa uu ku hoggaamin doonaa "dhaqan xumo, waxbarasho la'aan iyo wakhti lumis," ayaa lagu yiri hadalka.
Al-Shabaab oo uu cadaadisku ku sii kordhayo
Al-Shabaab ayaa cabsi xoog leh oo isisoo tareysa ka soo wajahday adeegyada casriga ah, taasoo keentay in ay qaataan go’aan qar iska tuurnimo ah, sida uu sheegay Cabdi Caynte, oo ah agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho.
"Waxa ay cabsi ka qabaan in taleefonnada Internet-ka leh lagula xiriiri karo hey'adaha sirdoonka caalamiga ah ee baacsanaya malleeshiyada Shabaab, gaar ahaan dayuuradaha aan cidna wadin ee drones-ka loo yaqaanno, oo aad u xannibay isu socodkii madaxda Shabaabka," ayuu u sheegay Sabahi.
Caynte waxa uu sheegay in sabab kale oo kalliftay go'aanka al-Shabaab uu ahaa ololeheeda ku aaddan in ay dadweynaha ka hor istaagto wararka beesha caalamka.
Al-Shabaab ayaa horay u mamnuucday adeegyo kale oo muhiim u ah helitaanka xogta ee goobaha ay maamusho, sida xannibaaddii ay ku soo rogtay daawashada telefishinnada iyo dhibaatadii ay ku haysay muwaadiniinta isticmaala moobiillada casriga ah.
"Waxay doonayaan in shacabka ku nool dhulalka ay heystaan aysan ka warbixin xaaladda qallafsan ee ay ku nool yihiin, oo aysan caalamka intiisa kale u sheegin dhibka ay [al-Shabaab] ku hayaan," ayuu yiri Caynte. "Internet-ku waxaa uu sahlaa xorriyadda macluumaadka, al-Shabaabkuna waa xorriyad diid."
Waxa uu sheegay in ay sidoo kale suuragal tahay in al-Shabaab ay doonayso in ay lacag uga baaddo shirkadaha isgaarsiinta iyaga oo taa uga baddalanaya inay faydaan xannibaadda internetka.
Caynte waxa uu sheegay in uunan u maleeynayn in xannibaaddaasi ay ka dhaqan-gali doonto aagagga ayan ka talin al-Shabaab.
Bishii November, ayay shirkadda Liquid Telecommunications waxay ku dhawaaqday in ay Soomaaliya keeynayso khadkii ugu horreeyay ee fiber-optic-ga. Khadka ayaa dhex-maraya xudduudda Kenya iyo Soomaaliya, kadibna ku xirmaya shabakadda Hormuud Telecom, taasoo kor u qaadaysa xawaaraha khadka maraya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Yuusuf al-Caddaala, oo ah agaasimaha waaxda saxaafadda ee Wasaaradda Warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in iskudayga al-Shabaab ay ku doonayso in ay ku mamnuucdo helitaanka khadka fiber-optic-ga uu fashilmi doono sababtoo ah adeegga waxaa Soomaaliya keenay xukuumadda wayna difaaci doontaa.
Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay in hanjabaadda al-Shabaab ay saameeyn ku yeelan karto nolosha dadka isticmaala internetka moobillada ee ku nool goobaha ay ka taliyaan xagjiriintu.
"Dadku waxa ay internetka u isticmaalaan ganacsi, waxbarasho iyo in ay ku helaan xog, wayna lumin doonaan arrintaas. Dhibaatada kale ee ka iman doonta halkan waxay tahay shaqo-la'aanta ku iman doonta dadka u shaqeeya shirkadaha bixiya internetka," ayuu al-Caddaala u sheegay Sabahi. "Shirkaduhu waa in ay kala doortaan in ay waayaan ganacsigooda oo ay kacaan, ama ay iska indha-tiraan amarka al-Shabaab oo ay bar-tilmaameed u noqdaan weerarrada aan kaal sooca lahayn ee al-Shabaab."
Iyada oo laga jawaabayo mamnuucidda al-Shabaab ee internet-ka, ayay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranku waxa ay sheegtay in ay qaadi doonto tallaabooyin ay kula dagaallamayso khidadaha cusub ee al-Shabaab.
"Dadka Soomaaliyed waxaa ay lamid yihiin dadka caalamka ku nool oo internetka u adeegsada waxbarashada iyo in ay la xiriiraan adduunka si ay macluumadka caalamka u helaan. Uma oggolaan doonno in dadkayaga laga hor istaago adeegsiga internetka iyo moobiillada casriga ah," ayuu hadal uu soo saaray 11-kii January ku yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Cabdixakiim Xuseen Guuleed.
"Xukuumadda Soomaaliya waxa ay la shaqeyn doontaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta si loo xaqiijiyo in ay si xor ah u gaarsiiyaan internetka muwaadiniintayada, xukuumadduna waxa ay sameyn doontaa dadaal kasta oo lagu difaacayo danta guud," ayuu yiri.
Guuleed waxa uu shirkadaha isgaarsiinta uga digay in ay la shaqeeyaan argaggixisada waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay mas'uul ka tahay difaaca muwaadiniinta.
Shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeegga internetka ee moobiillada laga isticmaalo ayaan wali wax hadal ah ka soo saarin mamnuucidda al-Shabaab kamana ay jawaabin codsiyo Sabahi ku doonaysay in ay arrinka uga faalloodaan.
Muwaadiniinta oo si adag u dhalleeceeyay xannibaadda internetka ee al-Shabaab
Axmed Maxamuud, oo ah 27-jir saxafi ah oo ka shaqeeya xarun raadiye oo ku taal Muqdisho, ayaa sheegay in uu ku rajo-waynaa in helitaanka internetka Soomaaliya uu ku sii fiicnana doono khadka fiber-optic-ga.
"Marka aan rabo inaan war yar internetka ka soo saaro, waxa ay igu qaadaneysaa waqti badan laakiin feyberku waa internet xawaare leh oo waqti yar kugu siin kara macluumaad aad u badan," ayuu u sheegay Sabahi.
Maxamuud waxa uu sheegay in qaabka kaliya ee dadka ku hoos nool xukunka al-Shabaab ay kula xiriiri karaan inta kale caalamka dadka kalena ku gaarsiin karaan duruurfahooda nololeed ay tahay internetka laga isticmaalo moobiilka. Laakiin waxuu sheegay in hadda "ay noqon doonaan dad dhaga la' oo indha la'."
Cabdi Axmed Maalin, oo ah 27-jir deggan xaafadda Taleex ee Muqdisho, ayaa sheegay in mamnuucidda al-Shabaab ku soo rogtay internetka ay markhaati dheeri ah u tahay sida ay kooxdu uga soo horjeeddo horumarka nolosha dadka.
Maalin waxa uu darajada heerka koowaad ee jaamacadda ee culuumta siyaasadda ka qaatay Jaamacadda Muqdisho waxaana uu isku diyaarinayay in uu online-ka Jaamacadda Kampala uga qaato barnaamijka diblomaasiyadda caalamiga ah.
"Go'aanka al-Shabaab waxa uu ka dhigan yahay in aanan waxbarasho helin," ayuu yiri. "Waxa ay sheegayaan in ay la dagaallamayaan cadowga, laakiin dhab ahaantii iyagaa cadow ah."
Maalin waxa uu sheegay in tallaabooyinka adadag ee al-Shabaab ay u baahan yihiin kacdoon dadweyne oo lagu jabinayo kooxda.
"Horay waxaan u ogeeyn in ay dadka u kala qaybiyeen laba kooxood: koox ku hoos nool oo ay dulleeysteen iyo koox ay ku shaabbadeeyeen in ay yihiin kufaar oo ay dilaan," ayuu yiri. "Hadda waxay ay marayaan dadku isagoo nool ha dhinto."
"Ma waxaan sugeynnaa in ay dhahaan qoys kasta ha noo keeno qof nool oo aan cunno? Waxani waa koox yar ee aan ku yaacno hal mar si aan isaga dul qaadno, " ayuu yiri Maalin. "Loo ma baahna inaan sugno tilaabo ciidan."
Waxa Qoray Cabdi Macallim - Faafinta: Sabahionline
Jannaayo 15, 2014